Unodoli weSanhui Thenga iinyani zothando zoLwakhiwo ziithengiswayo- iiUrdoll
Adaline 145CM G-Cup Sanhui Silicone Head Dynamic Atmosphere Blue Hair Beauty Silicone Sex unodoli
Kailani 156 CM E-Cup Sanhui Silicone Intloko isinxibo somfundi isihendo seSilicone Sex Doll
Alayah 156CM E-Cup Sanhui Silicone Intloko iinwele ezimfutshane iimpundu amabele amakhulu uSilicone Sex Doll
Amira 156CM E-Cup Sanhui Silicone Intloko iinwele ezinde ezingwevu iikawusi udade uSilicone Sex Doll
IPhoenix 145CM G-Cup Sanhui Silicone Intloko Intombazana entle enkulu eneenwele ezimhlophe Unodoli weSilicone weSilicone
Milani 145CM G-Cup Sanhui Silicone Head School idesika ubuhle isihendo Silicone Sex Doll
U-Annie 145CM G-Cup Sanhui Silicone Intloko eSexy ezinwele ezinde ezithe tye ubuhle unodoli weSilicone weSilicone
ULia 145CM G-Cup Sanhui Silicone Intloko ityhubhu enamabele amakhulu ubuhle obukhulu unodoli weSilicone weSini
I-Roselyn-156cm iBele eliBomvu elipheleleyo leSilicone No.
I-156cm enkulu yebele D-indebe yeSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele D-indebe yokwenza i-Special Sanhiu Doll
I-168cm D yeNdebe yeSifuba esikhulu seNombolo 1 iNtloko yeSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-D-indebe engu-2 yeNtloko yeSanhiu Doll
I-173cm enkulu yebele ye-E-indebe ye-6 intloko yeSanhiu Doll
I-168cm D yeNdebe yeSifuba esikhulu seNombolo 3 iNtloko yeSanhiu Doll
I-156cm yesifuba esincinci C-indebe engu-5 Sanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-F-indebe ye-6 yeNtloko yeSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-F-indebe engu-5 entloko iSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-F-indebe engu-4 entloko iSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-F-indebe engu-7 entloko iSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele D-indebe No. 8 Intloko yeSanhiu Doll
I-156cm enkulu yebele ye-D-indebe engu-5 yeNtloko yeSanhiu Doll
ISloan - i-145cm ubungakanani bedoli yesilivere Isifuba esincinci iSanhui Doll
I-Marleigh-156cm enkulu yebele epheleleyo ye-Silicone No. 3 iNtloko yePu yeSikhumba seSanhui Doll
U-Ezra-i-156cm i-Big Breast Full Silicone No. 1 iNtloko yesiqhelo seSikhumba seSanhui Doll
Thenga oonodoli bezesondo bokwenyani kooNodoli beSanhui abakwi-Intanethi
Oonodoli beSanhui luphawu oludala iminyaka emininzi. Eyona nto iphambili kuyo ngumlomo wayo oshukumayo. I-Sanhui Sex Doll yeyokuqala kushishino. Ine-makeup egqwesileyo kwaye inomlinganiselo othile wodumo kunye nefuthe. Ikwinqanaba eliphezulu kwi idilesi yesilicone yesini ishishini kunye nexabiso nayo iyafikeleleka.
Best ISanhui Dateted Sex Doll Brand
I-Sanhui Doll ngumvelisi oqeqeshiweyo, oonodoli be-sanhui bazimisele ukubonelela oonodoli bobulili be-sanhui obufana nobomi. Izinto abazenzayo iidoli zesondo ze-Sanhui zonke zikumgangatho ophezulu we-silicone yeplatinam yonyango evela eJapan. Unodoli weSanhui siskeleton sentsimbi esomeleleyo ehlala ixesha elide esenziwe ngegwebu elithambileyo. Iimveliso zoonodoli bezesondo zeSanhui zichasene nokungcoliswa, zingenathuli kwaye kulula ukuzicoca.
I-Sanhui lover dolls inika ingqalelo kwiinkcukacha zoonodoli bezesondo zabasetyhini, kunye nesikhumba, izandla kunye neenyawo zoonodoli bothando be-sanhui ziphantse zingabonakali kuthi bantu. I-brand ye-Sanhui iye yalinywa iminyaka emininzi kwaye iyonwabela idumela eliphezulu kwi-sanhui doll review market industry. Ilinganiswe njenge "yokuqala kwi unodoli wesondo ishishini" kuba unodoli weSanhui unelungelo elilodwa lomenzi womlomo wakhe oshukumayo.
Ukuthengiswa koonodoli beSanhui kukunika amava eSini ngenene angakholelekiyo
Sikubonelela ngoonodoli bezesondo bokwenyani, unokukhetha oonodoli okanye oonodoli be-silicone, kuba unodoli we-sanhui we-TPE uyaqhubeka nokwenza okuthambileyo kwe-silicone kwaye unesakhelo sentsimbi esomeleleyo. Le skeleton yensimbi ephezulu yobuchwepheshe inokufikelela kwiintshukumo zokwenyani zomntu, ikunika amava okwenene ngesondo. Eyakho unodoli wokwenene iya kukwazi ukuhamba ngokulula kwiindawo apho abantu banokufikelela kuyo.
Igama lebrand:Unodoli weSanhui
Material: Iidola zesondo eziSilicone Uhlobo: Thanda oonodoli bezesondo, unodoli onesifuba esiphantsi, unodoli wesini, njalo njalo.
Intshayelelo: Unodoli weSanhui luphawu olusekwe ixesha elide phesheya kweminyaka emininzi. Inenjineli ezigqwesileyo zokuqinisekisa ukuba imisebenzi yemveliso kunye nabayili abanamava babonelela ngokupakisha okunomtsalane ngexesha elifutshane. Ungafumana unodoli wesini owufunayo eSanhui sex doll online nangaliphi na ixesha! Oonodoli abahle sanhui yasekwa ngo-2010, ukuyila ekumgangatho ophezulu weplatinam yesilicone oonodoli. Iidoli zayo ze-silicone zezona ndawo zithengisa kakhulu.
+ Iminyaka emininzi yeBrand
+ I-Makeup ibuthathaka kakhulu
+ Kuyafana kwiLusu lokwenyani lokwenyani
I-145cm yeSanhui Doll
I-156cm yeSanhui Doll
I-158cm yeSanhui Doll
I-160cm yeSanhui Doll
I-161cm yeSanhui Doll
I-165cm yeSanhui Doll
I-168cm yeSanhui Doll
I-173cm yeSanhui Doll